Imibhalo kaSamir Sampat ivuliwe Martech Zone |
Imibhalo nge Samir Sampat
Isikhathi yikho konke ebhizinisini. Kungaba umehluko phakathi kwekhasimende elisha elingase libe khona kanye nokulengiswa. Akulindelekile ukuthi ufinyelele phambili ekuthengisweni emzamweni wakho wokuqala wekholi. Kungase kuthathe imizamo embalwa njengoba olunye ucwaningo lusikisela ukuthi kungathatha izingcingo ezingafinyelela kweziyi-18 ngaphambi kokuthi ufinyelele ukuhola ocingweni okokuqala ngqa. Yiqiniso, lokhu kuncike eziguquguqukayo eziningi nezimo, kodwa kukodwa